kukanganwa ndege dzisingaratidzi ganda rekunze kureva Matin Marauder rinongoratidzika mukati
mubvunzo kukanganwa ndege dzisingaratidzi ganda rekunze kureva Matin Marauder rinongoratidzika mukati
1 gore 1 mwedzi wapfuura #965 by robtho
Apo ini ndinosunungura dzimwe ndege, kureva Martin Marauder C47 Boeing Superfotress Ini ndinongotanga kushanda kwemukati ndege.
1 gore 1 mwedzi wapfuura - 1 gore 1 mwedzi wapfuura #966 by DRCW
Uri kutamba DX9 kana DX10 preview? Uri kumhanya FSX Steam kana Boxed? Kana Boxed uri kutarisana here kana kuti usina kukurumidza? Ndechipi chinyorwa chemawindo?
Last edit: 1 gore 1 mwedzi wapfuura DRCW.
1 gore 1 mwedzi wapfuura #967 by robtho
Ndiri kumhanya DX11 pawindo 7 unyanzvi nehurukuro yakarurama yeFSX. Ini ndangobva kurega uye ini ndiri kudzokera shure musti ndege mushure mekupera kwemakore saka ini ndiri pangozi. Asi ini ndinoona webhusaiti iyi inonakidza uye zvizhinji zvekutsvaga zvinoita sezviri kuita zvakanaka.Unfortunateley ndiyo iyo iwe unofarira chaizvo iyo
1 gore 1 mwedzi wapfuura - 1 gore 1 mwedzi wapfuura #968 by DRCW
Shamwari zvakare ... FSX mumenyu yako yekushandisa inogona kumhanya pane DX9 kana DX10 Preview / Apo FSX yakasikwa, ichangobva kusunungurwa kweDX10, asi inosvika paDX9 isipo. Enda kumenyu yako yezvokudya uye ona kuti DX10 bhokisi rekuona risati raongororwa. Rikooo ndege dzose dzinomhanya DX9 nekutadza. Zvimwe zvacho zvinonzi DX10 zvinoenderana kana zvichange zviri mune tsanangudzo. Pane purogiramu yakagadzirirwa inogona kugadzirisa DX10 preview, asi kunze kwekuti iwe uchitenga chirongwa chacho, zviri nani kumhanya FSX pane DX9. DX10 yekutsvaga sarudzo haisi kushanda zvakanaka, uye inokonzera mavara. Windows 7 inzvimbo yakagadzikana yeFSX uye ndizvo zvandinoshandisa pakuratiza ndege. Iye zvino wati iwe uri kutamba shanduro yakarurama yeFSX. Kana ndichinyatsonzwisisa izvi zvinoreva kuti une rimwe rekutanga rakasunungurwa mabhokisi, kana kuti deluxe version. Kana zvakadaro ndizvo zvaunoda kutakura SP1 uye SP2, kana Kuwedzerwa kunofanira kuwedzerwa. Pasina izvozvo, zvizhinji zvehurukuro itsva uye kubhadhara zvichave nezvakanyatsogadzirwa. Ndine FSX gold edition iyo inouya nekukurumidza disk. Kazhinji iwe uchawana kuti kunze kwekuti iwe uchitarisa DX10 Preview box apo iwe wakatakura purogiramu, dambudziko nderekuti FSX haisati yave yakasangana nematambudziko emabasa. Rega ndizive ... Thanks
1 gore 1 mwedzi wapfuura #971 by robtho
Fantastic !! Ndinokutendai zvikuru nemazano enyu omutsa uye kutungamirirwa. Yakadhindwa SP 1 & SP2 sezvamakafunga kuti inoshanda zvakanaka ikozvino. Ndinokutendai zvakare.
1 gore 1 mwedzi wapfuura #972 by DRCW
Ndicho chikonzero tiri pano, kuti tibatsirane tifare zvatinokumbira,
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: robtho
1 gore 1 mwedzi wapfuura #974 by robtho